Takalo tsara :Handray an-tanana ny fanomanana sy ny fikarakarana ny Festival Angaredona - Madagascar Informations
20 décembre 2018 Madagascar Informations Aucun commentaire
Hanomboka ny 19 ka hatramin’ny 25 Novambra 2019 ny Festival Angaredona .Hetsika ara-kolontsaina natao hanabeazana ny olona mba hananany fahendrena sy ho fampiraisana azy ireo hahay hiaina ao anaty fahasamihafana .
Ny 15 Novambra lasa teo no nijoro ny fikambanana takalo tsara fikambanana hivoy ny fifanakalozana ara-kolontsina eo amin’ny samy malagasy sy ny mponina maneran-tany .
Eo ihany koa ny fametrahana fanabeazana ara-tantara satria tsy afaka ny handroso mihintsy ny firenena iray raha tsy mahalala ny tantarany ny mponina ao aminy.
Hiaraha mahalala amin’izao fotoana izao fa marary ny kolontsaina Malagasy satria na ny fitenin-drazantsika aza zary lasa hatao ankilabao noho izany asa sy adidy goavana no miandry ny Fikambanana takalo tsara .
tanjona voalohany tsy maintsy apetraka ny hampahafantatra ny tantara ,ny fanomezana vahana ny fifanakalozana ara-kolontsaina eto Madagasikara sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ,hampahafantatra ireo kolontsaina maro loko ny Malagasy ,hametraka rafitra matanjaka ho fanabeazana ara-kolon-saina ,hampiroborobo ny tontolo ambanivohitra ary hiaro ny tontolo iainana amin’ny lafiny rehetra .
Fehiny firenena manana harena miavaka amboniny tany sy ambaniny tany I Madagasikara fa indrindra ny mponina ao aminy izay avy amin’ny foko 18 ary samy manana ny fomba fiteniny sy ny fomba amam-panaony avy izay najaina fatratra ka niteraka soatoavina maro loko nolovainy taranaka nifandimby koa noho izany rariny sy hintsiny loatra raha omen-danja ny kolontsain-tsika Malagasy .
← Processus électoral: soutien et accompagnement de l’UA
Obs SAFIDY , communique de presse du 21 12 2018 →
Programme : lutte contre l’insécurité (MIdi madagasikara)
30 novembre 2018 Madagascar Informations 0